इमेज साप्ताहिक : 2012
चट्याङ्गबाट तीनको मृत्यु
विदुर÷चट्याङ्गबाट गएको साता नुवाकोट जिल्लामा तीन जनाको ज्यान गएको छ ।
फिकुरी गाविस वडा नं. ६ पाजीगाउँमा बिहिवार राती परेको चट्याङ्गबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेहरूमा पाजीका ३१ राजकुमारी न्यौपाने र रसुवा डाँडागाउँका १३ वर्षिया बालिका मेनुका पौडेल रहेका छन् ।
उनीहरू आनन्दप्रसाद ओझाको घरमा विवाहको निम्तो मान्न गएका थिए । राती परेको चट्याङ्गले बेहुला लिलानाथ ओझा सहित १३ जना घाइते भएका छन् । उनीहरूको जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा उपचार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
त्यसै गरी, सूर्यमती गाविसमा एक युवाको ज्यान गएको छ । २१ बर्षिया शिवप्रसाद चालिसेको बिहान २ बजे परेको चट्याङ्ग लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । शौचालय जान निस्किएको समयमा चालिसेलाई चट्याङ्ग लागेको स्थानीयले बताएका छन् ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, April 15, 2012 No comments:
प्रशासनको छड्केमा ७८ कर्मचारी
विदुर÷जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छड्केमा ७८ कर्मचारी परेका छन् ।
प्रशासनले जिल्लाका विभिन्न २० वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको सरकारी कर्मचारीहरू छड्केमा परेका हुन् । छड्के जाँचका क्रममा सहायकदेखि अधिकृतस्तरसम्मका विभिन्न कर्मचारी अनुपस्थित भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन् । उनको नेतृत्वमा प्रशासन कार्यालयबाट गएको अनुगमन टोलीको छड्केमा २० वटा कार्यालयका ७८ वटा कर्मचारी छड्केमा परेका छन् ।
चार वटा समूहले जिल्ला विकास समिति, तथ्याङ्क कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतको कार्यालयमा अनुगमन गरेको हो ।
पहिलो आधुनिक प्लाण्टमिल
बट्टार÷नुवाकोट जिल्लामा धान कुट्ने पहिलो आधुनिक प्लाण्ट मिल सञ्चालनमा आएको छ ।
प्लाण्टमिल विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बट्टारमा तीन करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो ।
युनिक राईस मिल नामक उक्त मिलको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले शुक्रवार गरेका थिए । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै जोशीले लगानीकर्तालाई अब ढुक्क भएर लगानी गर्न उपयुक्त समय भएको बताए ।
राईस मिलका प्रोपाईटर तारा बहादुर कार्कीका अनुसार उक्त मिलबाट उत्पादित चामल नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवन, मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरू प्रमुख बजार रहेको छ ।
आधुनिक प्रविधिको मेटल उद्योग सञ्चालनमा
बट्टार÷नुवाकोटको बट्टार बजारमा आधुनिक प्रविधिको मेटल तथा मेकानिकल उद्योग सञ्चालनमा आएको छ ।
हाइड्रोलिक प्रविधि अन्र्तगत सञ्चालन हुने उक्त सुलभ मेटल तथा मेकानिक उद्योगको बिहिवार नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शरण उत्सुक सापकोटाले गरेका थिए । उद्योगमा ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएको सञ्चालक रामशरण अधिकारी र ईश्वरकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरीले खोस्यो मसाल
विदुर÷एकिकृत नेकपा माओवादी वैद्यपÔधरले नुवाकोटमा बुधवार बेलुकी मसाल जुलुस प्रदर्शन सुरु गरेलगत्तै प्रहरीले मसाल नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनाको मातहतमा बुझाइएकोमा विरोध जनाउूदै सदरमुकाम विदुरमा सरकार र पार्टीको संस्थापन पÔविरुद्ध चर्का नाराबाजी सहित वरिष्ठ उपाध्यÔ मोहन वैद्य समूहका कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रेका थिए ।
सेना समायोजन र पार्टी नेतृत्वविरुद्ध निकालेको मसाल जुलुस प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तÔेप गरी मसाल खोसेर निभाएको हो ।
वैद्य समूहले प्रहरीको घेराबन्दीमै जुलुस र कोणसभा गरेको थियो । सरकार र एकिकृत नेकपा माओवादीको संस्थापन पÔले विगतमा उठाइएका मुद्दाहरू छोडेर आत्मसमर्पण गरेको जनाउदै उक्त निर्णयको विरोध
स्वरुप बेलुकी मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको हो ।
जुलुसपछि कोणसभामा बोल्दै एकिकृत नेकपा माओवादी नुवाकोटकी ईन्चार्ज लक्ष्मी मुडभरीले विगतमा देश र जनताको लागी उठाइएका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्ने भूमिकामा रहेका जनमुक्ति सेनालाई सेना मातहतमा पु¥याएकोले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताइन् ।
उनीहरूले राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र विÈेश गरी माओवादीका नेताहरूले फेरि जनतालाई धोका दिएको दावी गर्दै जनताको संविधान बन्न नदिने कसरत गरिरहेको बताइन् ।
नागरिक समाजमा पुनः लामिछाने
विदुर÷नेपाल नागरिक समाजको पहिलो साधारण सभाले तदर्थ समितिका अध्यक्ष बाबुराम लामिछानेलाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ ।
अधिवेशनले उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षमा क्रमश ः केशव मिश्र, शिव देवकोटा र राधिका कुइँकेललाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ ।
त्यसै गरी, सदस्यहरूमा किरणप्रसाद अधिकारी, पुरेन्द्र ढकाल, राजुमित्र खनाल, पदम उप्रेती, अस्मिता थापा, बद्रि अर्याल र रमेश श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यसै गरी सल्लाहकारहरूमा सुरेन्द्रराज अधिकारी, रामबहादुर थापा र पुष्राज लोहनीलाई चयन गरेको छ ।
अधिवेशनको जिल्ला न्यायधिश पदमराज भट्टले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रेस चौतारीको अध्यक्षमा भट्ट
विदुर÷प्रेस चौतारी नुवाकोटको चौथो जिल्ला अविधेशजबाट देवचन्द्र भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ ।
मङ्गलवार सम्पन्न अधिवेशनबाट कार्य समितिको उपाध्यक्षमा विष्णु तारुके, सचिवमा भोलाराज पौडेल, सह–सचिव भैरबी ढुङ्गाना, कोषाध्यक्ष नवदिप अजनवी रहेका छन् । त्यसै गरी सदस्यहरूमा ईश्वर पौडेल र भरतसन्तोषि लामा, सल्लाहकारहरूमा शरणउत्सुक सापकोटा र केशव मिश्रलाई चयन गरेको छ ।
अधिवेशनको प्रेस चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष गगन विष्टले गरेका थिए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता विना कानूनी राज्य स्थापना हुन नसक्ने लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने भनाई राखेका थिए ।
गैसस महासंघमा उप्रेती
विदुर÷गैर सरकारी संस्था महासंघ नुवाकोटको सातौ अधिवेशनबाट पुनः पदम उप्रेती अध्यक्षमा सर्वसम्ममत चुनिएका छन् ।
अधिवेशनले उपाध्यक्षमा मिनकुमार केसी, सचिवमा लोचन भट्टराई, सहसचिवमा शर्मिला उप्रेती, कोषाध्यक्षमा बुद्धीमान तामाङलाई चयन गरेको छ । यस्तै सदस्यहरूमा रमेश प्रधान, यशोदा खतिवडा, गोकर्ण नेपाल, भवानी भट्ट, दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, साधुराम सापकोटा, पार्वती उप्रेती, भोजबहादुर नेपाली चयन भएका छन् ।
अधिवेशनमा राजनीतिक दलहरूले आफु खुसी पदको भागबण्डा गरेर स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार हुन चाहने संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई निषेध गरेका थिए । भागवण्डा अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीले उपाध्यक्ष सहित चार, नेपाली काँग्रेसले सचिव सहित पाँच र एमालेले अध्यक्ष सहित तीन सदस्य लिएका छन् ।
युनियनले वुझायो ज्ञापन पत्र
विदुर÷झापाका पत्रकार यादव पौडेलको हत्याको विरोध र दोषिमाथी कारबाहीको माग गर्दै नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोट शाखाले मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा ज्ञापान पत्र बुझाएको छ ।
हत्यामा सम्लग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न प्रेस युनियनले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्न राज्य पक्ष उदासिन बनिरहेको सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम नेपालले जानकारी दिएका छन् । ‘हत्या घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न र पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ’ विज्ञप्तमिा भनिएको छ ।
यसअघि पनि पत्रकार हत्याका घटनामा सम्लग्नलाई राज्यले कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । यादव पौडेलको घटनामा पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यस्ता घटनाको निरन्तरताले देशमा दण्डहिनता बढेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखा नुवाकोट पौडेलको हत्यामा सम्लग्न सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही गर्न र पत्रकारहरूको सुरक्षाको लागि थप गम्भिर हुन आग्रह गरेका छन् ।
विदुर÷गणेशस्थानका महिलाहरूले विक्रीका लागि बजार लैजाँदै गरेको अवस्थामा घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेका छन् ।
ज्वालामुखी महिला सशक्तिकरण संस्थाको अगुवाईमा ठूलो परिमाणको मदिरा सोमबार महिलाहरूले नष्ट गरेका हुन् । एक महिनादेखि गाउँमा जुवातास तथा जाँडरक्सी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका महिलाहरूको संस्थाले गणेशस्थान–४ फेदिवेसीमा २१ पाथी घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरिदिएका हुन् । संस्थाका अध्यक्ष शान्ता अधिकारी र सदस्य सुन्तली रिजालको नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूले मदिरा नष्ट गरिदिएको बताइएको छ ।
जुवातास विरुद्ध ऐक्यबद्धता
विदुर÷गणेशस्थान गाविसका महिला समुहले सञ्चालन गरेको जाँडरक्सी तथा जुवातास नियन्त्रण अभियानमा स्थानीय राजनीतिक दलले पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
अभियान सञ्चालनका लागि आइपर्ने समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई साथ दिने जनाएका हुन् । ज्वालामुखी महिला सशक्तिकरण संस्थाको आयोजनामा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका भैरव अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र बोगटी, एमालेका केशवराज गिरी, राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टीका बद्रीनाथ ढकाल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष शान्ता अधिकारी सदस्यहरू राधिका पौडेल र जगत अधिकारीतले मन्तव्य राखेका थिए ।
रेडक्रसको जिल्ला सभा सम्पन्न
विदुर÷नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोटको २३ औं जिल्ला सभा बिहिवार सम्पन्न भएको छ ।
सभाले उद्धारकोष वृद्धि गरिने लगायत २३ बुँदे प्रस्तावित कार्यक्रमहरू पारित गरेको छ । सभामा रेडक्रसको उद्धारकोष वृद्धि र प्रभावकारी गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयबाट अभियान अन्र्तगत न्युनतम दुई हजार रुपैयाँ जुनियर रेडक्रस सर्कल तथा युवा रेडक्रस सर्कल मार्फत सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । साथै यसका लागि २० वटै उपशाखाबाट जनही पाँच हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरी कोषको प्रयोगको लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरिने कार्यक्रम पारित भएको छ ।
सशस्त्र सङ्घर्षका कारण वेपत्ता व्यक्तिहरूसँग नियमित भेटघाट गर्ने र तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुका साथै इलाकास्तर र विद्यालयस्तरमा निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविर गरिनेलगायत २३ वुँदे कार्यक्रम रेडक्रसको सभाले पारित गरेको छ । सभाले मन्त्री भरत सुवेदीद्वारा प्रस्तुत प्रगती प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष शङ्कर अमात्यद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
रेडक्रस नुवाकोटका सभापति गणेशकुमार नेपालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रेमनाथ पौडेल, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष राजुमित्र खनाल, नेपाली कांग्रेसका सचिव लक्ष्मण श्रेष्ठले मन्तव्य राखेका थिए ।
३ ए को बाँध निर्माण सुरू
विदुर÷६० मेगावाटको माथिल्ले त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले बाँध निर्माण शुरू गरेको छ ।
प्रवेशमार्ग र तटबन्घ निर्माण सकेर मूख्य निर्माण थालिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजना प्रमुख ऋषिकेश शर्माका अनुसार बाँध निर्माण संगै दुई स्थानबाट एकसाथ सुरुङ्ग खन्न शुरू गरिएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीजीजीसीले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ । सन् २०१४ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी सो आयोजनाले जेठको दोस्रो सातादेखि आयोजनाको काम शुरू गरेको थियो । आयोजना निर्माणको लागि चीन सरकारले १० अर्ब छ करोड रुपैयाँको ऋण लगानी गरेको छ ।
परोपकारको स्थापना दिवस सम्पन्न
त्रिशुली÷परोपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रथम स्थापना दिवस मङ्गलवार सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका सदस्य कुलबहादुर खड्गीको प्रमुख आतित्थ्यतामा स्थापना दिवस भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी सङ्घका सदस्य नरेन्द्र प्रधान, सहकारीका सल्लाहकार हरिराम भण्डारी, सहकारीका सचिव विष्णुप्रसाद सापकोटालगायतले आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए ।
थानसिं÷ग्रामीण भेगका पशुपालक किसानहरूलाई सहयोग गर्न थानसिङ गाविसमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ ।
थानसिङ–१ कुमालाठाटीमा भएको शिविरमा गाई, बाख्रा र भैसीको विभिन्न रोगको उपचार तथा परिक्षण गरिएको छ ।
एक हजार पाच सय भन्दा बढी पशुको विभिन्न उपचार तथा स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । त्यसै गरी, शिविरमा एक सय भन्दा बढी पशुको गोबर परिक्षण भएको छ ।
टेक्निकल ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च इन्ष्टिच्यूट ललितपुर र राक्शेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा डा. उमेश मण्डलको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिकको टोलीले पशुहरूको परिक्षण गरेको हो ।
शिविरलाई एन पी एल डाबर, भेट फर्मा, भीरब्याक, मेडिभेट, इन्टरभेट, हिमालय भेट, म्यानकाइन, गुरास इन्टरनेशनल, इण्डियन हर्ज, सिपिएल लगायतका औषधी कम्पनीहरूले सहयोग गरेका थिए ।
पेट्रोल बेच्ने पसल शिलवन्दी
विदुर÷जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले खुद्रा पसलहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ राखेर विक्रि गर्ने पसलहरूमा छापा मारेको छ ।
सोही क्रममा ठूलो परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ भेटिएको एक पसलमा शिलन्दी गरेको छ । प्रशासन कार्यालयका अनुसार ककनी र ओखरपौवा गाविसका पसलहरूमा अनुगमन भएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्ने ककनी गाविसको एउटा पसलमा शिलबन्दी गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलको नेतृत्वमा गएको जिल्ला ककनी–३ स्थित पवित्रा लामाको पसलमा मापदण्ड विपरित पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीले पसलमा शिलबन्दी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलेले जनाएको छ ।
लामाको पसलमा डिजेल डिजेल राखिएको एक हजार लिटरको ड्रम, दुई सय लिटरको नौँ ड्रम, पेट्रोल भरिएको दुई सय लिटरको ड्रमसहितको सटर शिलबन्दी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताएका छन् ।
हरि लामिछानेको पसलमा सात सय लिटर, ओखरपौवा–३ का रिता श्रेष्ठको पसलमा दुई सय लिटर, शान्ता लामाको पसलमा १४ लिटर, उपेन्द्र श्रेष्ठको पसलमा ५० लिटर डिजेल र रमिला श्रेष्ठको पसलमा छ लिटर पेट्रोल फेला परेको थियो । डिजेल र पेट्रोलको बारेमा नेपाल आयल निगमलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा सरकारी अनुदान प्राप्त रासायनिक मल बढी मुल्यमा विक्रि गर्नेहरूलाई समेत कारबाहि गरिने भएको छ ।
ककनी–३ कै विष्णुप्रसाद भट्टको घरमा कृषकहरूलाई अनुदानमा विक्री वितरण हुने ६१ बोरा, विरबहादुर लामाको पसलमा २७ बोरा युरिया मल र दुई सय लिटर डिजेल बरामद गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, April 01, 2012 No comments:
मनकामना÷माथिल्लो त्रिशुली–३ ए जलविद्युत आयोजना निर्माणमा खटिएका चिनिया कामदार र स्थानीवासीबीच झडप हुँदा १० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
मङ्गलबार आयोजना निर्माणस्थल नुवाकोट जिल्लाको मनकामना गाविसको सिरुपानीमा ढल निर्माणको विषयमा झडप भएको बताइएको छ । चिनियाँ कामदारहरूले स्थानीयवासीमाथी कुटपिट गरेपछि झडप भएको बताइएको छ । चिनियाँ कामदारले नेपालीमाथी खुकुरी र रड प्रहार गरेको बताइएको छ ।
माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ए जलविद्युत आयोजनामा दुई सय चिनिया कामदार र ७० जना नेपाली कामदारहरू खटिएका छन् ।
त्यस अघि पनि नेपाली र चिनियाँ कामदार बचि विवाद हुँदै आएको थियो । अघिल्लो महिना पनि नेपाली कामदारलाई चिनियाँहरूले
खानेपानी उपलब्ध नगराएको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
सडकको ढल निर्माणमा लापरबाहि रहेको भन्दै स्थानीयहरूले हिम पाइप राख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सोही विषयलाई लिएर रड प्रहार भएको स्थानीयहरूको भनाई रहेको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि रसुवा र नुवाकोटबाट प्रहरीहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए ।
रेडियो त्रिशुली आरम्भ
विदुर÷नुवाकोटको सदरमुकाम विदुरबाट सामुदायिक रेडियो रेडियो त्रिशुलीले आफ्नो परिक्षण प्रशारण बुधवार दिउँसोबाट थालेको छ । रेडियोको मेगाजर्ह ८८.४ रहेको छ ।
एक सय वाट क्षमताको रेडियो त्रिशुलीले बुधवार दिउँसो २ः४५ बजेबाट परिक्षण प्रशारण आरम्भ गरेको हो । रेडियोको कार्यक्षेत्र नुवाकोटका अधिकांश भु–भाग र आसपासका जिल्लाहरूमा रहेको रेडियोका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले जानकारी दिएका छन् ।
रेडियोले परिक्षण प्रशारणको अवधिमा १२ घण्टा प्रशारण गर्ने बताइएको छ । रेडियोले बुधवार दुई घण्टा प्रशारण गरेको थियो । रेडियो त्रिशुलीले समाचार र समाचारजन्य सामग्रीहरूलाई प्रमुखताका साथ स्थान दिने अध्यक्ष खनालले जानकारी दिएका छन् । नुवाकोट जिल्लामा रेडियो त्रिशुली सहित चार वटा सामुदायिक रेडियोहरू प्रशारणमा रहेका छन् । यस अघि नुवाकोट एफएम, रडियो अभियान, रेडियो जालपा रहेका छन् ।
ढिकीजाँतो–सामरी भञ्ज्याङ पैदल मार्ग
विदुर÷ऐतिहासिक स्थल ढिकीजाँतो चुलीदेखि सामरी भञ्ज्याङसम्म पैदल मार्ग निर्माण गर्न नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्ने भएको छ ।
संघका अध्यक्ष शरणउत्सुक सापकोटाले पैदल मार्ग निर्माणका लागि स्थानीयबासी, जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायको समन्वयात्मक भुमिका तयार गर्न पहल शुरू गरिएको बताए । जिल्लाकै ऐतिहासिक, पर्यटकीय एवम् धार्मिक महत्व बोकेको यस क्षेत्रमा पैदल मार्ग निर्माण गरीए आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।
लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकलाई यो पैदल मार्ग पु¥याउन सके स्थानीय बासीको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिने र आन्तरिक पर्यटनको लागि समेत सम्भाब्य भएकाले तत्काल योजना बनाएर ट्रेकिङ ट्रेल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीय बद्री भट्टले बताउनुभएको छ । सदरमुकाम विदुरबाट सबैभन्दा नजिककोे ‘भ्यू प्वइन्ट’ भएकाले पनि यो ट्रयाक निकै महत्वपूर्ण भएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।
खानेपानी, विद्युत्, वासस्थान, वृक्षारोपण जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण गर्न‘पर्ने भएकाले स्थानीय निकाय, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित पक्षहरूले लगानी गर्नुपर्ने पर्यटन ब्यवसायीहरू बताउँछन् । विदुरबाट ढिकीजाँतो चुली पुग्न मुख्य दुई बाटो छन् ।
पहिलो, हात्तिगौंडा–मजुवा–माझिगाउँ–तीनधारे पिपलडाँडा माविहुँदै चारघरे–८ टिमुरडाँडासम्म मोटर पुग्छ । त्यहाँबाट आधा घण्टादेखि ४५ मिनेट हिँडेपछि चुलिमा पुग्न सकिन्छ । यो बाटोबाट जाँदा विदुरदेखि चूलिसम्मको दूरी १५ किलोमिटर पर्छ । दोस्रो बाटोचाहीँ बट्टारबाट देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रहुँदै जानुपर्ने हुन्छ । २२ किलोमिटर लामो यो बाटो मान्द्रेढुङ्गा–महेन्द्र मावि–चारघरे–भट्ट गाउँ–जामुनेहुँदै चुली पुग्न सकिन्छ । ढिकीजाँतो चुलीबाट सिङ्ला चुली–देउराली चुली–वैकुण्ठे चुलीहुँदै सामरी भञ्ज्याङ पुग्न सकिन्छ । प्रस्तावित पैदलमार्गमा यात्रा गर्न ओषत दुई घण्टा समय लाग्छ ।
छोटो दूरीको र सदरमुकामदेखि नजिकै भएकाले यस पैदलमार्ग विकास गर्न सके आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्ने आशा स्थानीयले गरेका छन् ।
छतमा बस्ने यात्रुलाई प्रहरीको थप्पड
विदुर÷बसको छतमा बसेर यात्रा गर्ने यात्रुलाई प्रहरले थप्पड लगाउन थालेको छ ।
गएको सोमवार बिहान ११ बजे त्रिशुलीबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको एक बसको छतमा बसेका नुवाकोट हल्देकालिका गाविस–९ का जीतबहादुर तामाङ सहित केहीलाई प्रहरीका असईले कुटेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ । छतमा बसेर यात्रा गर्न नपाइने नियम भएको भन्दै छतबाट तल ओरालेर ६० वर्षिया तामाङलाई कुटे लगत्तै स्थानियवासिन्दा अन्य यात्रुहरू प्रहरीमाथि खनिएका थिए । तनावका कारण करिब तीन घण्टा सवारी आवागमन बन्द भएको थियो । घटना साम्य पार्न ४० जनाको प्रहरी टोलीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिएर कुटपिटमा परेका यात्रुहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएको थियो । प्रहरीले अब प्रहरीबाट कुटपिट नहुने बताएर यात्रुहरूलाई फर्काएको छ । जिल्लामा सञ्चालित सवारी साधनका छतमा यात्रुहरू बस्ने र दुर्घटनाका घटनाहरूमा वृद्धि भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले छतमा बसेर यात्रा गर्न कडाई गरेको छ । प्रहरीले छतमा बसेर यात्रा गरेका यात्रुलाई ओरालेर कुट्न थालेको हो ।
बंैकमै पैसा असुरक्षित भएपछि
धुञ्चे÷बैकमा सुरक्षित राखिएको पैसा हराउला भनेर सायद स्याफ्रु गाविस– २ का ढिण्डुप तामाङले कहिलै सोचेका पनि थिएनन् होला, तर त्यस्तै भयो । उनले सुरक्षाका लागि बैंकमा गायव भएपछि रुन्चेहाँसो सुरु भएको छ । बुधबार ढिण्डुप तामाङले २०४७ साल देखि नेपाल बैँकको धुञ्चे शाखामा राखिएको पैसा गायव भएपछि असुरक्षाको भेद खुलेको हो ।
आफ्नो चौरी गोठ नै बेचेर जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गायव भएपछि तामाङमात्रै होइन बैंकका कर्मचारीहरूको समेत निद उडेको छ । उनको खातामा रहेको पैसा नक्कली नाम भएका धुञ्चे–५ का ढिण्डुप तामाङले तीन पटक गरेर झिकेको बैकको अभिलेखमा उल्लेख छ । ‘पैसा लिन आईयो तपाईले सबै पैसा झिकिसक्नु भयो भन्दा त म झस्याङ्गै भए’ उनले सुनाए ।
बैंकको अभिलेखमा २०६८ असोज १५ गते पाँच हजार रुपैयाँ, २०६८ साल कार्तिक ४ गते २० हजार रुपैयाँ र २०६८ साल मङ्सिर १६ मा पाँच लाख रुपैयाँ गरी जम्मा पाँच लाख २५ हजार रुपैयाँ रकम धुञ्चे घर भएको ढिण्डुप तामाङले किर्ते हस्ताक्षर गरेर झिकिएको पाईएको छ ।
बैकका कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त काम भएको भन्दै पिडित पक्षको उजुरीको आधारमा बैंकका बरिष्ठ सहायक अधिकृत युवराज श्रेष्ठ र बैंकमा कार्यरत कर्मचारी लामा तेन्जिङ तामाङ र नक्कली खातावाल बनेर रकम निकाल्ने ढिण्डुप तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
उनीहरूमाथी अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी नायव उपरिक्षक अच्युत पुडासैनीले जानकारी दिएका छन् ।
चार वर्ष पछि काज फिर्ता
त्रिशुली÷विभिन्न कारणहरू देखाउँदै वर्षै देखि काजमा बस्दै आएका नुवाकोट जिल्लाका ग्रामिण भेगका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटले फिर्ता गरेको छ ।
पियनको भरमा स्वास्थ्य कार्यालयहरू छाडेर हिँडेका र काम नै नगरी तलब खाइरहेका एक जना डाक्टर, तीन जना अहेव, तीन जना अनमी र दुई जना कार्यालय सहायक गरी गरी नौँ जनालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गाउँ फिर्ता पठाइएको हो ।
काज फिर्ता भएर सम्वन्धि कार्यालयमा हाजिर हुने कर्मचारीहरूमा डा. दिपेन्द्र पाण्डे प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र खरानिटार, अहेवहरू दिपक रिमाल रातमाटे, भुवनराज केसी समुन्द्रटार र सुनिल बैद्य दुईपिपल रहेका छन् । त्यसै गरी अनमी लक्ष्मी सापकोटा वागेश्वरी गाविस, चारु तामाङ ककनी र ललिता नेपाली देउराली रहेका ।
त्यसै गरी कार्यालय सहायकहरू उदय डङ्गोल मनकामना र खिलबहादुर प्याकुरेल ककनी फिर्ता भएका छन् । उनीहरू चार वर्षदेखि जिल्ला अस्पताल त्रिशुली नुवाकोटमा चार वर्ष देखि काजमा रहेका थिए । बुद्धिबहादुर खड्काको देउरालीमा दरवन्दी रहेको भएपनि उहाँको काज भने फिर्ता भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमै उमेरहदका कारण अवकाश पाउने भएकोले जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमै रहेको बताइएको छ ।
शुसासन अनुमगन समिति नुवाकोटले ग्रामिण भेगमा दरवन्दी रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको काज फिर्ता हुनुपर्ने माग एक वर्षदेखि उठाउँदै आएकोमा यो पाली कार्यान्वयन भएको संस्थाका अध्यक्ष एवं अस्पताल विकास समितिका सदस्य बसन्तराज केसीले जानकारी गराएका छन् । केसीका अनुसार अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू अझै पनि दरवन्दी कायम नभएका कार्यालयहरूमा नगएका र जिल्ला अस्पतालमै रहेकोले उनीहरूको काज फिर्ता गराउनका लागि समेत पहल भइरहेको छ ।
ग्रामिण भेगका स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी र अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा दरबन्दी कायम भएका अहेव लगाएतका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित गाविसमा गएर सेवा दिन निर्देशन दिइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. रमेशविक्रम सिंहले जानकारी दिएका छन् ।
तीन घरमा भिषण आगलागी
विदुर÷ घ्याङफेदी गाविस–५ घ्याङडाडाँमा गएको साता भएको आगलागीबाट तीन वटा घर जलेर नष्ट भएको छ ।
विहीवार दिउँसो भएको उक्त आगलागीबाट १५ लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षती भएको स्थानीय कर्मजित तामाङले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार स्थानीय याङदोर्जे मोक्तान र श्रीमेन्दो मोक्तानको घर जलेर नष्ट भएको छ । त्यसै गरी छिमेकी श्यामबहादुर मोक्तानको घरमा भने आशिंक रुपमा क्षति भएको छ ।
दिउँसोको समयमा आगलागी भएको कारण मानविय क्षती नभएको बताइएको छ । दिउँसोको समयमा घरका अभिभावक खेतवारीको काममा गएको समयमा घरमा बालबालिकाले आगो खेलाउँदा आगलागीको घटना भएको बताइएको छ ।
विदुर÷स्वास्थ्यकर्मीहरूको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम मङ्गलवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम गएको सोमवारबाट सुरु भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला अस्पताल त्रिशुली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सहभागीता रहेको छ । कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. रमेशविक्रम सिंह, तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख नवराज लम्साल, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरिक्षक रामेश्वर कुँवर सरकारी वकील कार्यालयका देवेन्द्रराज अर्याललले प्रशिक्षण दिएका थिए ।
खोलामा डुबेर विद्यार्थीको मृत्यु
विदुर÷नुवाकोटको तादी नदीमा डुबेर मङ्गलवार शाँझ एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा गेर्खु गाविस–१ का २० वर्षिय दिपक लामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । कक्षा ९ मा अध्ययनरत लामाको पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको जनाईएको छ ।
.श्रीमती भन्दा भैँसी प्यारो... खुकुरी प्रहारबाट श्रीमती घाइते
विदुर÷कहिले काँही आफ्नै श्रीमती भन्दा पनि भैँसी प्रिय हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् रसुवाका एक व्यक्तिले । भैँसीको स्याहारसुसार नगरेको झोकमा मदिरा पदार्थ सेवन गरेका धैबुङ्ग गाविस–८ का लयुल तामाङले श्रीमतीलाई मरणासन्न हुने गरी खुकुरी हानेका छन् ।
विदुर नगरपालिका–४ बट्टारमा डेरा गरी बस्दै आएका तामाङले श्रीमती कान्छी तामाङमाथी खुकुरी प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले छ । तामाङले श्रीमतीलाई भैंसीको स्याहार नगरेकोमा रिस उठेको र खुकुरी प्रहार गरेको प्रहरी वयान उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।
तामाङको उपचार काठमाडौँमा भइरहेको छ ।
पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवस
विदुर\_नेपाल पत्रकार महासङ्घको ५७ औँ स्थापना दिवसको आवसरमा जिल्ला शाखा नुवाकोटले शुक्रवार विदुरमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
शाखा अध्यक्ष राजुमित्र खनालको सभापत्तिवमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागि भएका थिए । आउँदो जेठ १४ मै संविधान भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य मोहनबहादुर खड्का, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य एवं बागमती अञ्चल ईञ्चार्ज शिव देवकोट, गैर सरकारी संस्था महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष पदम उप्रेती, नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुराम लामिछाने, नेपाल प्रेस युनियन नुवाकोटका अध्यक्ष श्रीराम नेपाल, प्रेस चौतारी नुवाकोटका उपाध्यक्ष देवचन्द्र भट्ट, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नुवाकोका सदस्य रामहरि गजुरेल, महिला मानव अधिकारी रक्षक सञ्जाल नुवाकोटका उपाध्यक्ष अस्मिता थापाल गायतकाले मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा प्रेसले निर्वाह गरेको भुमिका र पप्त उपलब्धीहरूको सुरक्षा गर्ने विषयमा आफ्ना भनाईहरू राखेका थिए ।
प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम
बट्टार÷कार्नेट नेपालले छ दिने प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम शुक्रवार बट्टारमा सम्पन्न गरेको छ ।
तालिममा नुवाकोटका दुईपिपल, तारुका, रातमाटे तथा खड्गभञ्ज्याङ गाविसका मण्डलीहरूका १७ जना अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिहरूलाई बाल दुब्र्यवहार तथा मानब बेचविखन विरुद्धको प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
तालिम पश्चात सहभागीहरूले आ–आफ्नो मण्डली तथा समुदायमा बाल यौन शोषण तथा मानव बेचविखन विरुद्धका सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहभागीहरूले तीन महिनाको लागि सचेतनाका कार्य योजना पनि बनाएका छन् ।
तालिमलाई कार्नेट नेपालका फिल्ड सुपरभाईजर सुरेन रसाईली, फिल्ड संयोजक गिरिजा भट्टराई तथा शाखा कार्यालयका क्लोसटर म्यानेजर पुरुषोतम डोटेलले सहजीकारण गरेका थिए ।
कार्नेट नेपाल नुवाकोट वर्किङ गु्रपका संयोजक ईश्वर पुडासैनी र कोषाध्यक्ष दिपक भर्तालले सहभागीहरूलाई शुभकामना दिँदै प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए ।
सहभागीहरूले मानब बेचविखनका सम्बन्धमा आफुहरूमा भएका नकारात्मक धारणामा परिवर्तन भएको बताएका छन् ।
महिला सञ्जालमा थापा मगर
विदुर÷महिला मानव अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जाल समिति नुवाकोटको प्रथम अधिवेशन विदुरमा सम्पन्न भएको छ ।
अधिवेशनले दुई बर्षे कार्यकालको लागी शर्मिला थापा मगरको अध्यक्षतामा नौ सदस्यिय कार्यसमितिको चयन गरेको छ ।
कार्य समिचिको उपाध्यक्षमा अस्मिता थापा, सचिवमा शर्मिला उप्रेती र कोषाध्यक्षमा सविना रिमाल छन् । त्यसै गरी सदस्यहरूमा मणि लामा, मिका रिमाल र दलितबाट मनोनित सदस्य सम्झना नेपाली छन् । मनोनित अन्य सदस्यहरूमा सुकुमाया तामाङ र पार्वती उपे्रती छन् ।
सल्लाहकारहरूमा शोभा श्रेष्ठ, विन्दा ढुङ्गाना, विन्दा अर्याल र महिला तथा बालबालिका कार्यालयका एक जना प्रतिनिधि रहने गरी चयन भएको छ ।
आर्थिक उपार्जनको लागि महिलाहरु समूहमा
बागेश्वरी÷वागेश्वरीका महिलाहरू आजकाल समूमा आबद्ध हुनथालेका छन् । कार्नेट नेपालले गरिब तथा विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई ब्यवसायीक सीप अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरि ब्यवसायीक कर्जा प्रदान गर्न थाले पछि गाउँलेहरूका निम्ति प्रशस्त अर्थ उपार्जनको लागि ठुलो ढोका खुलेको बागेश्वरीका महिलाहरू बताउँछन् ।
समूहमा लामबद्ध हुने क्रममा बुधवार बागेश्वरी गाविसको फलाँटेमा वागेश्वरी दिदी बहिनी उद्दार वचत तथा ऋण समूह र सुनौलो विहानी वचत तथा ऋण समूह गठन भएको छ । प्रत्येक समूहमा १२ जना सदस्यहरू रहेका छन् । उक्त समुहका अध्यक्षमा क्रमशः प्रमिसा सेडाई र भगवती सुनुवार छन् ।
त्यस अघि तालिमको आयोजना गरिएको बताइएको छ । तालिमलाई कार्नेट नेपाल नुवाकोटका क्लस्टर म्यानेजर पुरुषोतम डोटेलले सहजीकरण गरेका थिए । तालिममा समूहका आधारभूत तत्वहरू, वचत तथा ऋण परिचालनका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिईएको थियो । वागेश्वरी दिदी बहिनी उद्दार वचत तथा ऋण समूहका कोषाध्यक्ष अनुष्का आचार्यले आफ्नो नवगठित समूहले वित्तिय कारोवार मात्र नगरी समूदायमा हुने विकृति, विसंगति विरुद्ध तथा वाल दुब्र्यबहार र मानब बेचविखन विरुद्धका सामुदायिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने बताए । चैत्र २७ गते चोगदेमा एक समारोहमा विच नवगठित दुवै समूहका सदस्यहरूलाई जनहि दश हजार रुपैयाँ रकम बराबरको ब्यवसायीक सामानहरू तथा घर पालुवा जनावरहरू वितरण गर्ने जानकारी डोटेलले दिएका छन् ।
स्थानीयहरु फेरि आन्दोलनमा
ओखरपौवा÷उपत्याकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पटकपटक अवरोध सृजना गर्दै आएका नुवाकोट ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइडको आसपासका बासिन्दाले फेरि विभिन्न माग राखी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा मङ्गलवार सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सिसडोल संघ समितिका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर बलामीसहितको टोलीले स्थनीय विकास मन्त्रालय फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा श्रोत परिचालन केन्द्रका महाप्रवन्धक रामशरण महर्जनलाई विभिन्न तीन सुत्रीय माग राखी सात दिनभित्र माग पूरा गर्न दवाव स्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा ओखरपौवा गाविस वडा नंं ४ सिसडोलमा गत सात वर्ष देखि फालिदै आएको उपत्यकाको फोहोर वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ल्याण्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आधिकारीक विकास समिति गठन गरी सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा विगतमा भएका माग र सहमतिहरू पालना गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्ना मागहरू प्रति एक साता भित्रमा पनि सम्वन्धित निकाय गम्भिर नबने फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सृजना गरिने उनीहरूले बताएका छन् ।
दुईलाई निजामति सन्तती छात्रबृत्ति
विदुर÷निजामति कर्मचारीका दुई जना सन्ततीले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति पाउने भएका छन् ।
सुन्दरादेवी आयुर्वेद औषधालयका सहायक विदुर पाण्डेका छोरा अभिषेक र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयका सहयोगि छत्रप्रसाद ढुङ्गानाका छोरी प्रमीला ढुङ्गानाले छात्रबृत्ति पाउने भएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा चैत्र ५ गते बसेको विद्यार्थी छनोट सकितिको बैठकले उनीहरूलाई छात्रबृत्ति दिने निर्णय गरेको हो । उनीहरूले दुई वर्षसम्म मासिक पाँच हजार रुपैयाँ छात्रबृत्ति पाउने छन् । गतवर्षको एसएलसी परिक्षामा अभिषेकले ८२ प्रतिशत र प्रमीलाले ५१ दशमलव १३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका थिए ।
बहाल वा भूतपूर्व निजामति कर्मचारीका ती सन्तती, जो सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेर उत्कृष्ठ प्रतिशत ल्याउनेलाई यस्तो छात्रबृत्ति दिने घोषणा सरकारले गत आवमा गरेको थियो । यसको लागि ‘निजामति कर्मचारीलाई छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका २०६७’ जारी गरी आवेदन माग गरिएको थियो ।
सभासद् प्रेम तामाङ
रसुवा÷एकीकृत नेकपा माओवादीको रसुवा नेतृत्वको गैह्र राजनीतिक चरित्रको कारणले एक अर्काका बीचमा भौतिक आक्रमणसम्मको स्थितीमा आइपुगेको छ । गत एकवर्ष देखिको तल्लो स्तरको विवाद गत साताको प्रेस विज्ञेप्ती सार्वजनिक भएबाट चुलिएको हो । आन्तरिक विवादले रसुवा जिल्लामा ठुलो रुप लिएको छ । माओवादी संस्थापन पक्ष र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका जिल्ला स्तरिय नेताहरूको असन्तुष्टि र टकराबले निषेधको राजनीति सुरु भएको छ ।
जिल्ला विकास समिति रसुवाको १९ औँ जिल्ला परिषद्मा राजनीतिक दलहरूले योजना र बजेट बाडफाँड गरेर खाएको आरोपमा भट्टराई खेमाका सभासद् प्रेम तामाङले आफ्नै पार्टी र अन्य राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेका विरुद्ध लगातार एक वर्षसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरेपछि दलहरूले सभासद्लाई निषेध नै गरेका छन् । एकीकृत माओवादी सहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य साना दलहरूले सभासद् उपस्थित रहने सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्न थालेका छन् । काँग्रेस, एमाले सहितका अन्य दलहरूको सहयोगमा एकीकृत माओवादीले सभासद् तामाङलाई ‘एक्लाएको’ घोषणा गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी रसुवाद्धारा चैत ७, २०६८ मा जारी विज्ञप्ती अनुसार सभासद् तामाङले चैत १, २०६८ मा माओवादी पार्टीको नाममा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरि पार्टीको नाममा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिरहेका छन् । जिल्ला ईञ्चार्ज इन्द्र गौतम ‘जगतजङ्ग’द्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘कालिकास्थानको घुम्तीवजारमा कोणसभाको आयोजना गरी सभासद् प्रेम तामाङले जिल्ला पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको नामै किटान गरि आक्रमणको धम्की दिनुको साथै वेलुकी जिवजिवेमा नारायण देवकोटा, शंकर देवकोटा र अर्जुन लामिछानेको घर खानतलासी गरि जिल्ला सेक्रेटरी समिरलाई खोजी गरिनु र आक्रमण गर्ने धम्की दिने काम गरियो । सो को निरन्तरतामा अज्ञात समुहले चैत ४, २०६८ को राती १२ः५० वजे जिल्ला सेक्रेटरी समिरको घरमा ढुङ्गामुढा गर्ने काम भयो ।’
जिल्ला सेक्रेटरी माधव लामिछाने ‘समिर
जिल्ला सेक्रेटरी माधव लामिछाने ‘समिर’का अनुसार जनताका लागि काम गर्दागर्दै सभासद् तामाङले सबै दललाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएका कारण माओवादी, काँग्रेस, एमाले, नेकपा एकीकृत सहितका दलहरूले सभासद्लाई बहिष्कार गरेका हुन् । सभासद् तामाङले राजनीतिक दलका नाममा नेताहरूले गर्न लागेको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेकोमा आफुलाई माओवादी पार्टीले कालोमोसो लगाएर सडकमा पछार्ने धम्कि दिएको बताएका छन् । ‘जनप्रतिनिधि हुँ, जनताकै नाममा दलहरूले लुटगरेको विषयमा मैले बोल्न पाउनुपर्छ, रोक्न पाउनुपर्छ’ सभासद् तामाङले भने । माओवादीको पालुङटार बैठक अघि देखिनै रसुवामा विचार विहिन र विचार बोकेका माओवादीहरू बीच निरन्तर लडाई चलिरहेको उनको भनाई छ । ‘माओवादी जनतासंगै रहनुपर्छ भन्ने बिचार बोकेका र ऐसआराम गर्नुपुर्छ, उत्थानको प्रक्रृया आफैबाट थालिनुपर्छ भन्ने बिचारविहिन पक्षको लडाई जिल्लामा जारी छ’ तामाङले भने । रसुुवा माओवादीमा पछिल्लो पटक देखापरेको कलह पनि सोही प्रक्रृयाको निरन्तरता मात्रै भएको उनको दाबी छ । सेक्रेटरी समिरमाथीको आक्रमण प्रयासलाई तामाङले स्विकार गरेका छैनन् ।
जनताले खानेपानीको पाइप, विद्यालयमा बस्ने बेञ्च र चक समेत नपाइरहेको अवस्थामा प्रमख तीन राजनीतिक दलहरूले विभिन्न नाम देखाएर एकमुष्ठ रकम हत्याउन लागेको भन्दै दलका नेताहरू भ्रष्टाचारी रहेको दावी गर्दै सभासद् तामाङले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । माओवादी पार्टीले भने राजनीतिक दलहरूले जिविसको योजना तर्जुमा बैठकमा जनताबाट माग भएका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा रहेर बजेट बाडफाँड गरिएको र आफ्ना व्यक्तिगत माग परिषद्बाट सम्बोधन नभएपछि सभासद् तामाङले आफ्ना पार्टी सहित अन्य दलहरूलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको बताएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि जिल्ला विकास समिति रसुवाको १९ औँ परिषद्बाट एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेले आ–आफ्ना फरक योजनामा २०÷२० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सभासद् तामाङले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । एक वर्ष अघि सम्पन्न परिषद्बाट माओवादीको भागमा रेडियो सञ्चालन गर्न १५ लाख, सहकारीका लागी पाँच लाख गरी २० लाख रुपैयाँ, काँग्रेसको भागमा सहकारी संस्थाहरूमा खर्च गर्नेगरी २० लाख रुपैयाँ र एमालेको भागमा जडिबुटीको क्षेत्रमा काम गर्न भनि २० लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ विनियोजन गरेको थियो । सभासद् तामाङ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेको कालिका हिमालय उच्चमाविका लागि समेत १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । विवादका कारण ती योजनाहरू कुनै पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
नेपाली काँग्रेस रसुवाले भने माओवादीको आर्थिक द्धन्द्धका कारण आफ्नो पार्टीलाई समेत भ्रष्टाचारीको कित्तामा राखेर आलोचना गरेकामा आपत्ति जनाएको छ । रसुवा सभापति लामाकार्पो तामाङले सभासद्ले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न नसकेको र माओवादीको आन्तरिक आर्थिक द्धन्द्धमा काँग्रेसलाई मुछिनु खेदपुर्ण रहेको बताए । ‘रसुवा माओवादीले आठ वटा ट्रिपर गाडी, पेट्रोल पम्प र सहकारी सञ्चालन गरिरहेको र त्यसैको आन्तरिक विवाद सडकमा आएको हो, सभापति तामाङले भने– सभासद् आफ्नै चार वटा ट्रिपर सञ्चालन गरिरहेको सुनेका छौँ, यो विवाद दुई खेमाको र केही हदमा आर्थिक द्धन्द्धले छताछुल्ल भएको हो ।’ माओवादी भ्रष्टाचारी पार्टी रहेको दाबी गर्दै काँग्रेस सभापति तामाङले सभासद्ले आफ्नो पार्टीको विषयमा सही मुल्याङ्क गरेपछि काँम्ग्रेसलाई मुछेर सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचारी भनिनु आपत्ति जनक रहेको बताएका छन् ।
सभासद् तामाङ विद्यार्थी राजनीतिबाट माथी उठेका हुन् । जिल्ला तहमा सह–सक्रेटरीको हैसियतमा रहेका तामाङलाई जिल्लामा माओवादी नेतृत्वले जुनियर नेताका रुपमा हेर्ने गरेका छन् । २५ जना जिल्ला सदस्य रहेको रसुवा माओवादीमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको छ । मोहन बैद्यको पक्षधर जिल्ला स्तरिय नेता र कार्यकर्ता भने रसुवामा छैनन् । जिल्ला ईञ्चार्ज इन्द्र गौतम ‘जगतजङ्ग’, सेक्रेटरी माधव लामिछाने ‘समिर’ सहितका नेताहरू संस्थापनमा र सभासद् एवं सह सक्रेटरी प्रेम तामाङ, जिल्ला समिति सदस्य दावा तामाङलगायत छन् ।
यमी गुट भेलामा सहभागी
हिसिला सभासद् प्रेम तामाङका साथमा रसुवामा ।
भोर्ले÷केन्द्रिय स्तरमा एकीकृत माओवादीको संस्थापन र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एउटै कित्तामा देखिएपनि रसुवामा भने फरक फरक भेलामा लागेका छन् । रसुवामा संस्थापन र भट्टराई पक्षका मात्र कार्यकर्ताहरू छन् ।
शनिवार उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षधर समुहका नेताहरूले आयोजना गरेको बनभोजमा उपाध्यक्ष भट्टराई पत्नि हिसिला यमीनै सहभागि भएका छन् । रसुवाको भोर्ले गाविसमा भट्टराई पक्षधर मानिने सभासद् प्रेम तामाङले राखेको भेलामा यमी सहभागी हुन आएका हुन् । माओवादीको संस्थापन पक्षका जिल्ला ईन्चार्ज ईन्द्र गौतम ‘जगतजङ्ग’ले भने आफुहरू सो भेलामा सहभागी नभएको जनाएका छन् । संस्थापन पक्ष र भट्टराई पक्ष बिचार समुहले मिलेर जाने र किरण पक्षसंगै बैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार भईरहेको बेला प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले गुटको भेलामा सहभागिता जनाउनु आपत्तिजनक रहेको रसुवा माओवादीले प्रतिक्रृया दिएको छ ।
पार्टीभित्रै द्धन्द्ध बढ्दै गएपछि सभासद् प्रेम तामाङले आफ्नो शक्ति प्रर्दशनका लागी बनभोज तथा भेलाको आयोजना गरेको माओवादीका एक सदस्यले बताए । भेलामा सहभागी ठाकुर अधिकारीका बनभोजमा भट्टराई पक्षका कार्यकर्ताहरूका लागि गोप्य तथा आन्तरिक प्रशिक्षण दिइएको थियो । भेलामा चार सय भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बनभोजमा पत्रकारहरूलाई आन्तरिक छलफल भएको र कार्यकर्ताहरू मात्र सहभागि हुनसक्ने भनेर प्रवेश दिइएको थिइएन । तर नुवाकोटबाट आएका पर्यटन साप्ताहिकका श्यामसुन्दर पुडासैनीलाई भने प्रवेश दिइएको थियो । पुडासैनीले कार्यकर्ता नभई पत्रकारको हैसियतले कार्यक्रममा सहभागि भएको दावी गरेका छन् ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, March 25, 2012 No comments:
नुवाकोट एफएमलाई कारबाहिको माग
विदुर÷नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नुवाकोटले नुवाकोट एफएमले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको र गल्ति स्विकार नगरेको भन्दै कारबाहिको माग गरेको छ ।
जिल्लामा सञ्चालित प्रवेशिका परिक्षा (एसएलसी) नेविसंघले अमर्यादित बनाएको भन्दै समाचर सम्प्रेषण गरेकोमा कारबाहिको माग गरेका हुन् । मदानपुर स्थित शक्ति उच्चमावि परिक्षा केन्द्रमा नेविसंघले चैत ७ गते विद्यार्थीहरूलाई चिट चोराएको भन्दै नुवाकोट एफएमले गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त समाचारको जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले खण्डन समेत गरेको छ ।
नेविसंघ शक्ति उमावि इकाई सभापति अश्विन सिलवालले चैत ८ गते विज्ञप्ती जारी गरेर भ्रमक र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा खेद व्यक्त गरेका छन् । नेविसंघ नुवाकोटका सभापति मछिन्द्र खड्काले राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा नुवाकोट एफएमले आफ्नो संस्थामाथी आक्षेप लगाएको बताएका छन् ।
विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षकहरूले मङ्गलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई भेटी कारबाहिको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । उनीहरूले नुवाकोटले एफएमले उक्त समाचारको पुष्टि गर्न नसकेको र माफी नमागेको कारण आफुहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
साथै नुवाकबोट एफएम सञ्चालन गर्ने संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही आर्थिक वर्ष देखि नविकरण समेत नभएको उल्लेख गर्दै गैह्र कानूनी हिसावबाट सञ्चालन भएको सञ्चार संस्थालाई रोक लगाउन आग्रह गरेका छन् ।
प्रजिअ पाण्डेले भने सञ्चार संस्थालाई आफुले केही गर्न नसक्ने र विद्यार्थी या नागरिक स्तरबाट बहिष्कार र भौतिक कारवाही भएपनि आफुले आँखा चिम्लने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । मैले केही गर्न मिल्दैन, प्रजिअले भने– तपाईहरू गर्नुस् ।’ पत्रकार र सञ्चारसंस्थाले पाण्डेको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उज्यालोको यात्रामा मर्सेनी तामाङ
चार वर्षदेखि दुवै आँखाको ज्योती गुमाएका घ्याङफेदी गाविसका ७४ वर्षिया मर्सेनी तामाङ घ्याङफेदी प्राविमा एक साता अघि सञ्चालित आँखा शिविरमा आँखाको परिक्षणका लागि छोरी जरिना र आफन्तसंग आउँदै । तस्बिर सौजन्य ः दिपक खड्का÷तिलगङ्गा आँखा केन्द्र
विदुर÷खरानीटारमा गएको साता भएको निःशुल्क आँखा शल्यक्रियामा दुई सय दुई जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया भएको छ ।
जसमा नुवाकोट जिल्लाको घ्याङ्फेदी गाविस नेगीका मर्सेनी तामाङले जीवनमा पहिलो पटक ठूलो उपहार पाएँ । चार वर्ष देखि ओछ्यान र भान्सामा ओहोरदोहोर गर्न पनि अरुको सहारा आवश्यक पर्ने ७४ वर्षिया तामाङको दुवै आँखाको ज्योती जब शल्यक्रियाबाट फर्कियो, संसारमा अत्यान्तै खुसी हुने मध्येमा त्यस बेला उनी पनि एक थिइन् ।
तीलगंगा आँखा केन्द्र काठमाडौं, नुवाकोट सामुदायिक आँखाको केन्द्र र नेपाल रेडक्रस
सोसाइटी नुवाकोटको संयुक्त आयोजनामा खरानीटारको अमरज्योति उच्च माविमा सम्पन्न तीन दिने शिविरमा मर्सेनी तामाङले आँखाको ज्योती उपहार पाएका हुन् । उनीजस्ता दुई सय दुई जनाको आँखाको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
डा. वेन लिम्वु र रचना सिंहसहित दुई चिकित्सक र १७ जनाको आँखा प्राविधिकको टोलीले दुई सय दुई जनाको आँखाको मोतीयाविन्दुको शल्यक्रिया र तीन सय सात जनाको आँखा परिक्षण गरि आवश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको कार्यक्रम संयोजक दिपक खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
मोतियाविन्दुका विरामीहरू पहिचान गर्न गत महिना जिल्लाको विभिन्न नौँ गाविसमा शिविर सञ्चालन गरी छानिएका मोतियाविन्दुका रोगीहरूको खरानिटारमा शल्यक्रिया गरिएको नुवाकोट सामुदायिक आँखा केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख शंकर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
पहाडमा हाट बजार सञ्चालन
चोकदे÷हिजो सम्म घरधन्दाबाट फुर्सद नपाएका नुवाकोटका महिलाहरू हाट बजार सञ्चालन गरी आर्थिक उर्पाजन गर्न थालेका छन् । बागेश्वरी गाउँ विकास समिति –४ चोकदेका १२ जना महिलाहरूले हाट बजार हरेक हप्ताको बुधवार सञ्चालन गर्न थालेका हुन् ।
हाट बजारमा बिभिन्न खालका घरायसि उत्पादनका सामाग्रीहरू, खाद्य सामाग्रिहरू, आफ्नै करेसामा फलाइएका तरकारी, हस्तकलाका सामाग्रीहरू, सरसफाइका सामाग्रीहरूको बिक्रि गरिएको थियो । जिल्लामा पहिलो पल्ट राखिएको हाट बजारमा गा्रहकहरूको घुइचो लागेको थियो ।
गा्रहकहरू स्थानियस्तरमा उत्पादित वस्तुहरूको किनबेच गर्न पाएकोमा खुशि थिए । कार्नेट नेपालले नविन मण्डली चोगदेमा गएको चैत्र ३ गते देखि ८ गते सम्म सञ्चालन गरेको छ दिने अति विपन्न वर्गकाहरूका निम्ति ‘ब्यवसायीक सीप अभिवृद्धि तालिम’को समापन सँगै सहभागीहरूले हाट बजार सञ्चालन गरेको बताइएको छ ।
कार्नेट नेपाल नुवाकोटका क्लस्टर म्यानेजर पुरुषोतम डोटेलका अनुसार हाटबजार सञ्चालकहरूले अर्थ उपार्जन गर्दै आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाई अधिकार प्रर्वद्धन गर्ने तथा शैक्षिक अवसरलाई सहजै प्रदान गरि बालबालिकाहरूमा हुने विभिन्न दुव्र्यवहारहरू तथा अनेक खालका जोखिमको निकटतालाई दुर गराउन प्रतिबद्ध हुनेमा विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । आमा दिदीबहिनीहरू बीचको सामुहिक एकतालाई सुदृढ गरि आफुहरू माथी हुने हिंसा विरुद्धको प्रतिरक्षात्मक चिन्तन र कार्यको उचाईमा पुग्ने समेत डोटेलले बताएका छन् ।
तालिमको समापन कार्नेट नेपालकी निर्देशक शर्मिला घिमिरेले गरेका थिए । समापन कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाण पत्र बितरण गदै अतिथि तथा सुर्यगढी क्याम्पस बागेश्वरीका प्रमुख लालबहादुर कुँवरले तालिम लक्षित व्यक्तिहरूले नै पाएको भन्दै समाज रुपान्तरणको लागि यस तालिमले ठुलो सहयोग गर्ने कुराको उद्घोष गदै सहभागीहरूको सफल ब्यवसायको निम्ति शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
१२ करोडमा पुल निर्माण हुने
विदुर÷विदुर–७ र खड्गभन्ज्याङ गाविस–४ को त्रिशुली नदीमाथि पुल निर्माण हुने भएको छ । पुलको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयश त्रिपाठी र उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले संयुक्त रुपमा शनिवार शिल्यान्यास गरेका छन् ।
पुल १२ करोड ७४ लाख ६८ हजार पाँच सय रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । पुलको निर्माण कार्य २०७० साल मंसिर भित्र हुने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताएका छन् । स्टिल ट्रसका साथ आरसीसी ढलान गरिने पुलको लम्वाई एक सय ८० मिटर र ६ मिटर चौडाई हुने जनाइएको छ ।
यसैवीच, जिल्लाका राजनीतिक दलहरूलाई आसन ग्रहण नगरेका, मर्यादाक्रम नमिलाएको र विकास निर्माणको कार्यमा शुभकामना मन्तव्य राख्न नदिएको बन्दै तीन राजनीतिक दलहरूले कार्यत्रलम वहिष्कार गरेर हिडेका थिए ।
नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष नारायणप्रसाद खतिवडा, र राप्रपाका जिल्ला सदस्य रामकृष्ण भट्टले आयोजकबाट दलहरूलाई अपमान र छोटो शुभकामना मन्तव्य समेत राख्न नदिएको विरोध जनाउँदै कार्यक्रम बहिष्कार गरेको घोषणा गरेका थिए ।
सहायक केन्द्राध्यक्ष निष्काशित
विदुर÷एसएलसी परिक्षामा सहायक केन्द्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका एक जना शिक्षकलाई परिक्षा समन्वय समितिले निष्काशित गरेको छ ।
हात्तिगौडा स्थित भैरुम उच्चमावि केन्द्रका सहायक केन्द्राध्यक्ष अशोक साहलाई परिक्षाको मर्यादा र नियम विपरित कार्य गरेको भन्दै निष्काशित गरेको हो । विहिवार परिक्षा समन्वय समितिको बैठकले साहलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटले यो पाली देखि परिक्षामा हुने गरेका घटनाहरूको दैनिक जानकारी दिनको लागी पत्रकार सम्मेलनको आयोजन ागर्ने गरेता पनि उक्त तथ्यलाई भने लुकाएको छ । शनिवार जिल्ला शिक्षा कार्यालय नुवाकोटका उप सचिव नरेन्द्रराज पौडेलसंग भएको कुराकानी अनुसार ‘काम गर्न नसकेर साहले राजिनामा दिएका रे !’
यसै बीच, देउरालीको भुमेदेवी उच्च मावि परिक्षा केन्द्रबाट एसएलसीमा सहभागी भएकी एक छात्रा सुत्केरी भएका छन् ।
अजिङ्गेर उच्चमाविका इन्दिरा खड्काले परिक्षाको भोलिपल्ट बुधबार विहान जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा छोरी जन्माएका छन् । उनको बुधबारको नेपाली विषयको परिक्षा छुटे पनि शुक्रबारबाट परिक्षामा सहभागी भएका छन् ।
नुवाकोटमा सबै २१ वटै परिक्षा केन्द्रमा हालसम्मका परिक्षा शान्त र मर्यादित रुपमा परिक्षा सञ्चालन भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
शिक्षा कार्यालयले यस पालीबाट परिक्षा सकिएपछि प्रत्यके दिन एक बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारीहरू दिने नयाँ कार्यको सुरुवात गरेको छ ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनले गर्दा सञ्चारमाध्याममा आधिकारीक जानकारी एकै प्रकारको गएको दावी शिक्षा कार्यालयले गरेको छ ।
शिक्षा कार्यलयको अनुसार यो बर्षको एसएलसी परिक्षामा आठ जना विभिन्न किसिमका अपाङ्गहरू सहभागी भएका छन् । परिक्षामा दुई दृष्टिविहीन र छ शारिरिक अपाङ्गता भएकाहरू परिक्षामा सहभागी छन् । उनीहरू सबै नियमति तर्फका परिक्षार्थी रहेको बताइएको छ ।
प्राप्त समाचार अनुसार गेर्खुको सुन्दरीक्यौरेनी उच्च मावि परिक्षाकेन्द्रबाट चण्डेश्वरी उच्च माविका दृष्टिविहीनहरू शोभा न्यौपाने र संगम श्रेष्ठले सहयोगी राखेर परिक्षा दिएका छन् ।
भवानी उच्च मावि परिक्षा केन्द्रबाट शारिरिक अपाङ्गता भएकाहरू कालिका निमावि चाउथेका असिम भारती, लाङटाङस्नो भ्यू बोर्डिङ्ग स्कुलका बविता तामाङ र भवानी उमावि ओखरपौवाका अस्मिता बलामीले परिक्षा दिइरहेका छन् ।
चण्डेश्वरी उमाविका कृष्ण फुँयालले सुन्दरीक्यौरिनी उमावि केन्द्रबाट सहयोगी राखेर परिक्षा दिईरहेका छन् । अपाङ्गता भएका परिक्षार्थीको लागि परिक्षा समय डेढ घण्टासम्म थप गरिएको छ ।
जिल्ला कारागारमा थुनामा रहेको जनज्ञान उच्च माविका नियमित तर्फका परिक्षार्थी सुमन थपलियाले कारागारबाटै परिक्षा दिइरहेका छन् । –प्रशिक्षार्थी
नुवाकोटमा बैंक खोल्नेको होड
बट्टार÷पछिल्लो समयमा नुवाकोटमा बैंक तथा बित्तिय संस्था खोल्ने क्रमले तीब्रता पाएको छ । यसै क्रममा प्राईम बैंकले नुवाकोटको बट्टारमा विधिवत रुपमा आफ्नो शाखा खोली गएको सोमवारबाट कारोवार शुरु गरेको छ ।
प्राईमले आफ्नो २८ औं शाखाको रुपमा बैंकका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रदाश श्रेष्ठले उद्घाटन गरी नुवाकोटमा नया शाखा विस्तार गरेको हो ।
हाल राष्ट्रबैंकले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ शाखा खोल्नको लागि मोफसलमा शाखा विस्तार गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि नुवाकोटमा बैंक तथा बित्तिय संस्था खोल्ने क्रमले तीव्रता पाएको हो । नयाँ बैंक तथा बित्तिय संस्था खोलेसंगै स्थानीय युवा युवतीले रोजगारीको अवसर समेत पाएका छन् । साथै बैंकहरूले शाखा विस्तारसंगै बैंक तथा बित्तिय संस्थामा भएको प्रतिस्पर्धासंगै ग्राहक तथा व्यवसायीहरूले थप सेवा तथा सुविधा पनि पाएका छन् । अहिले बढेको प्रतिस्पर्धासंगै ग्राहकल ३६५ दिनै निक्षेप जम्मा र झिक्ने एवं आर्थिक कारोवार गर्ने सुविधा पाएका छन् ।
यता बैंकले पनि प्रतिस्पर्धा संगै उद्यम तथा व्यवासय गर्न चाहनेहरूको संख्या जति बढेपनि निक्षेप सङ्कलन तथा ऋण कारोवारमा खासै कमी नआएको र मुलुकको आर्थिक विकास संगै व्यवसाय तथा आर्थिक कारोवारमा लाग्न चाहनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूको वृद्धिसंगै बैंकहरूलाई खासै असर नपरेको बैंकका सञ्चालनकहरूको भनाई छ ।
नुवाकोट जिल्लामा नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, हाम्रो विकास बैंक, एनबी बैंक, एनडिइपी बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गरी सातबटा तिनीहरूको शाखा सहित एक दर्जन भन्दा बढी बैंकहरू रहेका छन् ।
शान्ति समितिमा अर्याल
विदुर÷स्थानीय शान्ति समिति नुवाकोटको संयोजकमा विन्दा अर्याल छानिएका छन् ।
समितिको मङ्गलबार विदुरमा बसेको बैठकले संयोजकमा अर्याललाई चयन गरेको हो । एकिकृत माओवादी तर्फबाट संयोजक बनेका नवीन पुडासैनीको चार महिने पदाबधि सकिएपछि नेपाली कांग्रेसको पालो आएको र काँग्रेसका तर्फबाट अर्यालय संयोजक छनोट भएको बताइएको छ ।
नुवाकोटमा कृषि गणना सम्पन्न
विदुर÷छैठौं राष्ट्रिय कृषि गणना सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक १०÷१० वर्षमा गरिने कृषि गणना गएको महिना सम्पन्न भएको र सङ्कलित विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा पठाइएको कृषि गणना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
कृषि गणना अधिकृत नवराज लम्सालका अनुसार तथ्याङ्किय विधि अनुसार छनौट गरिएका विदुर नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७ र ९ तथा ६१ मध्ये ५२ वटा गाविसका ७२ वटा वडावाट विवरण सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलकहरूले कार्यालयमा वुझाउने कार्य सम्पन्न भएपछि प्रारम्भिक विवरणका लागि सङ्कलित विवरण केन्द्रमा पठाइएको छ ।
जिल्ला कृषि गणना कार्यालयले गत माघको पहिलो सातादेखि सञ्चालन गरेको गणनाको लागी २० जना गणक र पाँच जना सुपरभाइजर खटाइएको थियो ।
पुण्यतिथिमा स्मृती सभा
विदुर÷नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महानायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाको दोश्रो पुण्यतिथिमा नेपाली काँग्रेस नुवाकोटको आयोजनामा मङ्गलबार सदरमुकाम विदुरमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति एवं संबिधानसभा सदस्य जगदीश्वरनरसिंह केसीले शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याई लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सकेमात्र गिरिजाप्रसाद कोईरालाको सपना साकार हुने धारणा व्यक्त गरे । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुन नदिन केही शक्तिहरू लगिपरेको बताउँदै सभासद् केसीले त्यसका बिरुद्ध काँग्रेस लगायत सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने केसीले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँगे्रस नुवाकोटका निवर्तमान सभापति ध्रुव अधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष गोबिन्द थपलिया, प्रेस युनियनका केन्द्रिय सदस्य शिव देवकोटा, महिला संघका अध्यक्ष बिन्दा अर्याल, काँग्रेस जिल्ला सहसचिव दिपक लामा, सदस्य रुपा पाण्डेलगायतका वक्ताहरूले गिरिजाप्रसाद कोईरालाको व्यक्तित्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रतिको योगदानका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, March 18, 2012 No comments:
.श्रीमती भन्दा भैँसी प्यारो... खुकुरी प्रहारबाट श्...